Ministeran’ny Fitaterana : Manamafy fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina -
AccueilSongandinaMinisteran’ny Fitaterana : Manamafy fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina
Ministeran’ny Fitaterana : Manamafy fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina
Ao anatin’ny vanim-potoan’ny fahavaratra isika amin’izao fotoana izao. Ao anatin’ny vanim-potoan’ny rivodoza ihany koa. Amin’ny maha nosy an’i Madagasikara mantsy, matetika handalovan’ny rivodoza hatrany. Noho izany indrindra, dia manamafy fiaraha-miasa amin’ny mpilatsaka an-tsitrapo ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetr’andro (MTM) manoloana ny fiatrehana ny rivodoza.
Araka izany, nanambara ny teo anivon’ny minisitera fa ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay no tena zava-dehibe amin’ny vanim-potoan’ny rivodoza. Miainga eny ifotony ary mipaka hatrany amin’ny mpanapa-kevitra izany fandraisana andraikitra izany. Noho izany indrindra dia ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ireo mpiara-miombon’antoka maro.
Raha ny fampitam-baovao, dia anisan’ireo mpiara-miombon’antoka miara-miasa amin’ny MTM ny eo amin’ny Sehatra Asa Fampandrosoana FJKM (SAF-FJKM), izay ahitana ny Tily, Mpanazava ary ny eo anivon’ny Vokovoko Mena Malagasy. Ny tanjona amin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta dia ny hanomezam-baovao mialoha ny mpiara-belona mba ahafahan’izy ireo miaro ny ainy sy mamantatra ny tokony ataony mialoha ny hitrangana na handalovan’ny rivodoza.
Raha ny fanazavana mantsy, manana mpilatsaka an-tsitrapo miisa 10 000 manerana ny Nosy, amin’ireo Faritra 22, ny SAF-FJKM. Noho izany indrindra,dia nanome fiofanana azy ireo ny teo anivon’ny MTM tamin’ny alalan’ny Météo Malagasy, tamin’iny volana desambra lasa teo iny. Niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao manoloana ny loza sy amin’ireo karazana fanambarana (maitso, mavo, mena ary manga) ny fiofanana tamin’izany. Voalaza fa Mpanazava miisa 950 no nahazo fiofanana tamin’ny Météo Malagasy ,ary izy ireo no miandraikitra ny fampitam-baovao amin’ireo Tily sy Mpanazava rehetra manerana ny Nosy, izay miisa 90 000. Ny Vokovoko Mena kosa, etsy andaniny, dia hampiasa “système d’information” manokana hanaparitahany ireo vaovao mahakasika ny rivodoza amin’ireo mpilatsaka an-tsitrapo, ary izy ireo indray avy eo no manatanteraka ny hetsika fanentanana ny mpiara-belona manerana ireo Faritra 22, sns.